हिमाल खबरपत्रिका | घर मनोविज्ञान
‘घरको भर’ (८–२१, असोज) आवरण रिपोर्टले यस वर्षको दशैं उथलपुथल बनायो, घर मात्रै सम्झइरह्यो । हामी जस्ता विदेशिएका युवालाई त घरको झ्न् माया लाग्ने गरी लेखिएको रहेछ । पत्रिका त यता आइपुगेन, अनलाइनमै पढ्दा पनि आनन्द आयो । विदेशीमा घरप्रति त्यति आसक्ति हुँदैन । तर, हामी नेपालीको भने घरप्रति आसक्ति बुझन सकिएन । म पनि घर बनाउने सपना बोकेर विदेश आएको हुँ । यता आएर सोच्दैछु, जहाँ बस्यो त्यहीं पो घर हुँदोरहेछ । किन यस्तो सपना देखे हुँला !
यताका मान्छेहरूले हामीले जस्तो घर बनाउने, जे कुरा पनि घरसँगै जोड्ने गर्दा रहेनछन् । मेरा अधिकांश विदेशी साथीभाइलाई घरको वास्तै हँुदैन । कहिलेकाहीं आफन्तसँग कुराकानी गर्छन्, नत्र आफ्नै तालका छन् । तर मजस्तै थुप्रै नेपाली छन्, जो हरेक हप्ता घरमा फोन नगरी धीत मर्दैन । खाएको, पिएकोदेखि लिएर गाउँघरका सबै खबर सोध्छन्, म नि त्यस्तै गर्छु । यसको कारण राम्ररी खोतल्न भने रिपोर्टले ध्यान नदिए झैं लाग्यो ।
रवीन्द्र अधिकारी, सिओल, दक्षिणकोरिया
‘घरको हुटहुटी’ (८–२१, असोज) रिपोर्टले नेपालीको अचाक्ली घरजग्गा मोह देखाएको छ । यस्तो लाग्छ कि, घरजग्गा विना जीवनको परिकल्पना नै हुँदैन, सामाजिक नै मानिंदैन । जसरी पनि घर बनाऊ, जग्गा जोड भन्ने मनोविज्ञान झङ्गिदो छ । जसले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी बनाइरहेको छ ।
दिलीप मुनकर्मी, अनलाइनबाट
‘कसरी जोगाउने वन्यजन्तु’ (८–२१, असोज) रिपोर्टमा उल्लेख भएजस्तै राजमार्गहरू वन्यजन्तुका लागि काल बनिरहेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तु मर्ने प्रमुख कारण सवारी साधनको ठक्कर पनि एक हो । अन्य राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । हामी एकातिर वन्यजन्तुको संरक्षणमा लागिरहेका छौं भने अर्कोतिर विकासका नाममा वन्यजन्तुको विनाश पनि गरिरहेका छौं । अब भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा वन्यजन्तुलाई पनि ध्यानमा राख्न जरूरी छ ।
कपिल काफ्ले, इमेलबाट
‘मूलधारलाई मत’ (८–२१, असोज) रिपोर्टमा प्रदेश–२ को स्थानीय तह निर्वाचनको मतलाई ठीकसँग विश्लेषण गरिएको छ । मतदाताले क्षेत्रीय दल भन्दा मूलधारका राजनीतिक दललाई नै मत दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मत तथा जीतको संख्याले त्यही देखाउँछ । यसको अर्थ फेरि मधेशका मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि कमजोर छन् भन्ने होइन । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल; संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक पनि मूलधारका राजनीतिक दलकै हाराहारीमा उभिएका छन् । त्यसैले मूलधारलाई मत भन्दैमा मधेशका मुद्दालाई पाखा लगाउनुहुन्न ।
मुकेश श्रीवास्तव, अनलाइनबाट
स्रष्टाहरूलाई धन्यवाद !
‘नेपाल सानै छ, देवकोटाज्यू !’ (८–२१, असोज) कविता गज्जब लाग्यो । कविलाई बधाई । यसको मतलब अरू कविता कमसल थिए भन्ने होइन, यो भने ‘उत्कृष्ट’ लागेको हो ।
उसो त हिमाल को दशैं साहित्य विशेषाङ्क जहिल्यै पठनीय तथा संग्रहणीय हुन्छ । यस वर्षको विशेषाङ्कमा पनि उत्कृष्ट रचनाहरू प्रकाशित गरिएका छन् । छापिएका सबै कथाले सामाजिक विषयवस्तुलाई मज्जाले उठान गरेका छन् । कविताहरूले विकृतिमाथि प्रहार गरेका छन् । विगत कोट्याएका निबन्ध, अनुभूति तथा संस्मरणहरू रोचक छन् । नयाँ स्रष्टाहरूलाई ठाउँ दिने हिमाल को प्रयास राम्रो छ । केही पुराना स्थापित र केही नयाँ स्रष्टाहरूका रचनाले दशैंलाई साहित्यमयी बनाउन मद्दत ग¥यो । सबै स्रष्टालाई धन्यवाद !
रचना ढुङ्गाना, इमेलबाट
‘गोप्य लुम्बिनी !’ (८–२१, असोज) लेखले लुम्बिनीको वास्तविकता छर्लङ्ग पारेको छ । म पनि लुम्बिनी घुम्न जाँदा यस्तै अलमलमा परेको थिएँ । लुम्बिनीका विषयमा जानकारी दिन कम्तीमा पनि प्रवेशद्वारमै सूचना डेक्स राख्नुपर्ने थियो । अझ् लुम्बिनी जाने यातायातका साधनमै तथा बसपार्कमै लुम्बिनी सम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । लुम्बिनी क्षेत्रमा आवश्यक सूचना, जानकारी दिने गाइडहरू खटाएको हुनुपथ्र्यो । तर, केही छैन, बेहाल छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीका विषयमा सामान्य जानकारी पाउन पनि गाह्रो छ । लुम्बिनी विकास कोषले ध्यान दिनुपर्छ ।
सन्तोष क्षेत्री, अनलाइनबाट